कुकुर पनि फिल्मको निर्माता ?! (फिल्मसहित) – Complete Nepali News Portal
कुकुर पनि फिल्मको निर्माता ?! (फिल्मसहित)
March 1, 2017	6,840 Views
११ फागुन । कुकुर पनि फिल्मको निर्माता ! यसोभन्दा पत्यार नलाग्ला र, पत्याउँनु पनि कसरी ? तर, हालै सोसल मिडिया यु–ट्युबमा रिलिज भएको एक शर्ट फिल्मको निर्माता क्रिस्टल नामको कुकुर छन् । एमएमएस इन्टरटेनमेन्टको प्रस्तुती रहेको ‘१४ फ्रेबु्रअरी’ नामको साइलेन्स शर्ट फिल्मको निर्माता ‘क्रिस्टल’ हुन् । क्रिस्टल त्यही कुकुरको नाम हो, जुन सेतो रंगका छन् । भ्यालेनटाइन–डे लक्षित उक्त फिल्मको प्रस्तुतकर्ता मोडल तथा गीतकार दर्पण राई हुन् । क्रिस्टल, जो दर्पणकै घरमा पालिएको कुकुर हो ।
दर्पण कलाकारिता क्षेत्रमा फरक काम गर्न चाहन्छन् । र, त्यसैले उनी छोटो समयमै चर्चामा पनि आएका छन् । ‘तिमीले बाटो फे-यौ अरे’ जस्ता ब्लकबस्टर गीतका गीतकार दर्पणले शर्ट फिल्म ‘१४ फ्रेबु्रअरी’का लागि पनि केही भिन्न काम गरेका छन् । प्रथम कुरो त उनले फिल्ममा निर्माताका रुपमा क्रिस्टललाई प्रस्तुत गरे । फिल्म्मा दर्पणकै कथा तथा निर्देशन रहेको छ । यो फिल्म रिलिज हुँदा ‘क्रिस्टल’ को हुन् भनेर खोजी नभएको पनि होइन । तर, त्यतिखेर दर्पणले आफ्नो निर्मातालाई बाहिर ल्याउन चाहेनन् । तर, जब उनले आफ्नो चलचित्र यु–ट्युबमा रिलिज गरे, तब उनले भने, ‘त्यो क्रिस्टल त मेरो घरमा पालेको कुकुर पो त ।’ आफ्नो घरमा माया गरेर पालेको भएकाले उक्त कुकुरको नाम क्रिस्टल राखेको र फिल्ममा निर्माताका रुपमा प्रस्तुत गरेको बताए ।